ကိုထွန်းဝေ စာမျက်နှာ : ပြည်သူတိုင်း ကိုကာကွယ်ဖို့ ပြည်သူ့တပ်မတော် စစ်စစ် လိုပါတယ်. . .
ပြည်သူတိုင်း ကိုကာကွယ်ဖို့ ပြည်သူ့တပ်မတော် စစ်စစ် လိုပါတယ်. . .
ဒီ ကချင်စစ်ပွဲတွေဖြစ်တိုင်း ကေအိုင်အေ ကို ၀င်ပြီးဆဲကြတဲ့ သူတွေဟာ စစ်အုပ်စု က လူငယ်တွေချည်းသာမဟုတ်၊ ဒီမိုကရေစီရေးမှာ ပါဝင်လှုပ်ရှားနေ၊ တချို့ ကချင်စစ်ဘေးသင့်ဒုက္ခသည်ပြည်သူတွေအရေးမှာ ပါဝင်လှုပ်ရှားကြတဲ့ လူငယ်တွေတောင် ပါဝင်နေတယ် ဆိုတာ သတိထားမိတယ်။
ဒီလူငယ်တွေရဲ့ အမြင်မှာ ကေအိုင်အေ ဟာ ဘာလို့ ဆဲစရာ ဖြစ်နေသလဲ ဆိုတာ
သေချာ လေ့လာသုံးသပ်ကြည့်ဖို့ လိုမယ်ထင်တယ်။
သူတို့ထဲက တော်တော်များများက ဘုမသိ၊ ဘမသိ၊ ဦးကျော်ဆန်း ရဲ့ ၀ါဒဖြန့်တာ၊ဦးခင်ညွန့်ရဲ့ လုပ်ကြံသတင်းဖြန့်ချိတာ တွေရဲ့ လွှမ်းမိုးခံရမှုတွေကြောင့်။
တချို့ကတော့ ကျနော်တို့တောင် မသိသေးတာတွေ သိထားတယ်ဆိုပဲ။
တချို့ကတော့ ကေအိုင်အေ က ပြည်ထောင်စုထဲက ခွဲထွက်မှာ မို့ ဆိုပဲ။
အတော်များများ ကတော့ မဆလ ပညာရေး ရဲ့ ဘရိန်းဝပ်ရ်ှ လုပ်ခံထားရတဲ့
ပြည်ထောင်စုအတု ကို ကာကွယ်ဖို့လိုတယ် ဆိုတဲ့ စိတ်စွဲကြီး သန်နေတာကို တွေ့ရပြန်တယ်။
စစ်မှန်တဲ့ ပြည်ထောင်စု တရပ်ကို ဘယ်လိုတည်ဆောက်မယ် ဆိုတဲ့ အဖြေရှာသူတွေထက် ဒီပြည်ထောင်စုအတု ကိုတော့ အပျက်မခံနိုင်ဘူး ဆိုတဲ့ စကားနဲ့ပဲ စ နေတတ်ပြန်တယ်။
အများဆုံးတွေ့ရတာ ကချင်စစ်ပွဲ ဓါတ်ပုံတွေရဲ့အောက်မှာ အပြန်အလှန် ကချင် ဗမာ နာမည်တပ်ပြီး ဆဲကြတာ။ အင်မတန်စိတ်ပျက်စရာကောင်းလှတယ်။
တကယ်တော့ ဒီတိုင်းပြည်မှာ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတရပ်ဟာ ဖေါက်ပြန်ပြီး၊
အာဏာကို ချုပ်ကိုင် ဒီတိုင်းပြည်ရဲ့ တိုင်းသူပြည်သားတိုင်းကို ဖိနှိပ်အုပ်ချုပ်ခဲ့တာ
နှစ်ပေါင်း ၅၀ ကျော်လာခဲ့ပြီ။
တကယ့် ဗမာပြည်သူတွေထဲမှာ ကချင်မုန်းစိတ်ရှိမနေပေမယ့်၊ ကချင်တိုင်းရင်းသားတွေ အပါအ၀င် တိုင်းရင်းသားတိုင်းရဲ့စိတ်တွေထဲမှာ ဗမာ မုန်းစိတ်တွေ ခိုအောင်းနေတယ်။
ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ အဲဒီတိုင်းရင်းသားတွေနေတဲ့ ဒေသတွေကို ရောက်လာတဲ့
ဗမာတွေဟာ စစ်တပ်အသွင်နဲ့ရောက်လာတဲ့သူတွေ၊ စီးပွားရှာဖို့ရောက်လာတဲ့ လူတွေ။ တကယ့် ကျေးလက်က ဗမာတွေ၊ လက်ပံတောင်းတောင်မှာနေတဲ့ အဖိအနှိပ်ခံ ဗမာပြည်သူတွေ မျိုး မဟုတ်ပါဘူး။
ရွာထဲကိုဝင်လာတာနဲ့ တွေ့သမျှ အကောင်တွေကို ပစ်ခတ်စားသောက်၊ လုယက်၊ မိန်းကလေးတွေကို မုဒိန်းကျင့်၊ ယောက်ျားတွေကို ပေါ်တာဆွဲ၊ ပစ်သတ် ဆိုတဲ့ စစ်တပ်ဟာ ပြည်မက ပြည်သူတွေကိုလည်း သိပ်မကွာခြားလှတဲ့ ဆက်ဆံမှု
တွေနဲ့ အနိုင်ကျင့်အုပ်ချုပ်နေတယ် ဆိုတာ ဟောဒီဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ပေါ်တက်လာတဲ့
တကယ်တော့ ဒီစစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ လက်ကိုင်တုတ်တပ်တွေ ရဲ့ အကြမ်းဖက်မှု
တွေ ရန်ကနေ ကာကွယ်ဖို့ လိုအပ်နေတာ နယ်စပ်က တိုင်းရင်းသားတွေသာမက၊ ပြည်မက ပြည်သူတွေ၊ ရန်ကုန်မန္တလေးမြို့ကြီးတွေက ပြည်သူတွေပါ လိုနေတယ် ဆိုတာ ၈၈၈၈ အပါအ၀င် ရွှေဝါရောင် လက်ပံတောင်းတောင် အရေးအခင်းတွေက သက်သေပါပဲ။
ဒါကို တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးက မြင်အောင် ကြည့်ပြီး၊ လက်ခံလာဖို့၊
ဗမာ မုန်းတီးရေး အစွဲ ကြီးနေတဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေကို ဗမာပြည်သူတွေလည်း ဒီအာဏာရှင် အောက်မှာ ဒီလို ဖိနှိပ်ခံနေရတာပါပဲ ဆိုတဲ့ အသိအမြင်ကို ပထမဆုံး
ပေးနိုင်ခဲ့တာ ၈၈၈၈ က ပေါက်ဖွားလာခဲ့တဲ့ ABSDF ကျောင်းသားတပ်မတော် ပါ။
ကရင်တွေနဲ့အတူ၊ ကချင်တွေနဲ့အတူ၊ ကယန်းတွေနဲ့အတူ တိုက်ပွဲဝင်ပြီး အသေခံခဲ့တဲ့ မြန်မာပြည်အနှံ့က လူငယ်လေးတွေ၊ ကျောင်းသားလေးတွေ ဟာ
အဲဒီ သမိုင်းစာမျက်နှာသစ်တရပ်ကို ဖွင့်လှစ်ပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ကျနော်တို့လိုနေတာ လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေးကို အခြေခံထားတာမဟုတ်ဘဲ၊ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုရေး၊ ဒီမိုကရေစီရေး ကို တန်ဖိုးထားအခြေခံတဲ့ တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံကို ကိုယ်စားပြုတဲ့၊ ပြည်သူတရပ်လုံးကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတရပ်ပါပဲ။
ပြည်သူကိုကာကွယ်မယ့် ပြည်သူ့တပ်မတော်ဆိုတာ တိုင်းပြည်တိုင်းမှာ ကို လိုပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း တပ်မတော် ဆိုတာကို ဖွဲ့ခဲ့တာပေါ့။
ဒါပေမယ့် တပ်မတော် က ပြည်သူ့တပ်မတော်ကနေ လက်နက်ကိုင်သူခိုးဓါးပြ သောင်းကျမ်းသူအဖွဲ့အစည်းတရပ်၊ ယူနီဖေါင်းဝတ်ထားတဲ့ မာဖီးယားဂိုဏ်းသာသာ အဖွဲ့အစည်းတရပ် ဖြစ်သွားပြီ ဆိုမှတော့ ပြည်သူတွေကို ကာကွယ်ဖို့ စစ်မှန်တဲ့ ပြည်သူ့တပ်မတော်တရပ် လိုကို လိုနေတာအမှန်ပါပဲ။
တပ်မတော် ဆိုတဲ့ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေက တပ်မတော်ရဲ့ ပဋိဉာဉ် ပျက်
စီးသွားပြီ၊ ရပ်တည်ချက်မမှန်တော့ဘူး ဆိုရင် ပြည်သူတွေဟာ ကိုယ်ကျိုးစီးပွားအတွက် လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ပိုင်ခွင်၊့ သူတို့ရဲ့အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်တွေအတွက် ကာကွယ်ပိုင်ခွင့်ဟာ တရားဥပဒေနဲ့ အညီကို ရှိပါတယ်။ လူတိုင်းကိုယ့်အသက်အန္တရာယ်ကို ကာကွယ်ပိုင်ခွင့်ဟာ ဥပဒေတိုင်းမှာ ရှိပါတယ်။
ပြည်သူတွေကို ကာကွယ်မယ့် ပြည်သူ့တပ်မတော်စစ်စစ် မရှိမချင်း လက်တဆုပ်စာ လူတစုရဲ့ အကျိုးစီးပွားအတွက် ပြည်သူတွေရဲ့ အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်တွေကို တန်ဖိုးမထား တိုက်ခိုက်မှုတွေ ခံနေရဦးမှာပါပဲ။
ဒီတပ်မတော်ဟာ အာဏာရှင်တပ်မတော် ဖြစ်နေသေးသရွေ့၊ ခရိုနီတပ်မတော်ဖြစ်နေသေးသရွေ့၊ ပြည်သူ့တပ်မတော်အစစ်တရပ် ပေါ်လာဖို့ လိုနေမှာပါပဲ။
29.12.2012 by VOA news
“ဒီကိစ္စက သူတို့ သိပြီးသားပါ။ သူတို့ရဲ့ စီမံချက် ရှိတဲ့အတိုင်း လုပ်ဆောင်တဲ့ ကိစ္စပါ။ ဒါကြောင့်မိုလို့ ဒီကိစ္စမှာ ကျနော်တို့က ခင်ဗျားတို့ လေယာဉ်နဲ့ လာပစ်ပါတယ် ဆိုပြီးတော့ ပြောစရာလည်း မလိုပါဘူး။ ဒါ သူတို့ပဲ စဉ်းစားပြီးတော့ လုပ်ရမယ့် ကိစ္စတခုပါ။”